Tadalafil पाउडर खरीद गर्नुहोस् (१171596१29 5-२XNUMX-)) निर्माता र कारखाना
दर्जा: SKU: 171596-29-5. श्रेणी: सेक्स सिकन हार्मोनहरू
Tadalafil पाउडर, तादालफिल को कच्चे माल, एक प्रकार को सफेद पाउडर हो, सामान्यतया यो tadalafil गोलियाँ बनाउन को लागि प्रयोग भएको थियो। Tadalafil औषधि, aslo भनिन्छ / Cialis, पीडीई-5 (फास्फोडीस्टरase प्रकार 5) अवरोधक को रूप मा जाना जाने को एक वर्ग मा एक।
एएसएआर ग्र्यामबाट सामूहिक क्रम (कच्चा ताडालाल (सीियालीस) पाउडर (171596-29-5) को संश्लेषण र उत्पादन क्षमताको साथ हो, सीजीएमपी विनियमन र ट्र्याकिबल गुणस्तर नियन्त्रण प्रणाली अन्तर्गत।
कच्चा तादाफाफिल पाउडर (सीआईलियस पाउडर) भिडियो
कच्चा टाडालुफिल (सीआईलिस) पाउडर आधारभूत क्यारेक्टरहरू
नाम: Tadalafil (Cialis) पाउडर
आणविक वजन: 389.4
पिघल प्वाइन्ट: 298-300 ° C
भण्डारण अस्थायी: 20ºC
1.AASraw कच्चा ताडलाफिल पाउडर (सीआईलिस पाउडर) प्रदान गर्दछ, जुन'धेरै सामान्य तरिकाले पत्ता लगाइयो।
2.AASraw वस्तुहरु को लागि विस्तृत व्यञ्जनहरु र दिशानिर्देश प्रदान गर्दछ (गैरआवासीय पाउडर) Tadalafil पाउडर संग.
ताडलाफिल पाउडर के हो?
ताडलफिल पाउडर, टाडालुफिलको कच्चा माल, एक प्रकारको सेतो पाउडर हो, सामान्यतया यो टाडाफाफिल गोलहरू बनाउन प्रयोग गरिन्छ। Tadalafil औषधि, aslo भनिन्छ / Cialis, पीडीई-5 (फास्फोडीस्टरase प्रकार 5) अवरोधक को रूप मा जाना ड्रग को एक वर्ग हो। सेक्स को बढावा टाडलफिल / सीआईएलिसले रक्त वाहिकाओं को मांसपेशिहरु लाई आराम गर्दछ र शरीर को विशेष क्षेत्रहरुमा रक्त प्रवाह बढ्छ। Tadalafil / Cialis र अन्य पीडीई-5अवरोधकहरु लाई एक पुरुष यौन उत्तेजित हुन्छ जब erectile प्रतिक्रिया को बढावा गरेर erectile dysfunction (ईडी) संग पुरुषहरु लाई मदद गर्न सक्छन्। यो अरटाइलाइल डिसफंक्शन (नपुंसक) र बेनाइन प्रोटेटिक हाइपरट्रॉफी (लक्षण प्रोस्टेट) के लक्षणों का इलाज करने के लिए प्रयोग किया जाता है। सामान्यतया मान्छेले शुद्ध शुद्धता टाडाफाफिल पाउडर आपूर्तिकर्ताबाट टाडालुफिल पाउडर खरिद गर्दछ। ताडालफिल / सीआईएलिसका अलावा, यस कक्षामा अन्य औषधीहरू वियाग्रा (सिल्डेनफिल) र लेभीट्र (वर्डेनफिल्ल) र फ्लिबिन्सरिन हुन्।
PDE5 धेरै मर्मताइल रोगबाट पीडित पुरुषहरुमा पाइन्छ एक एन्जाइम हो। यो अर्को धेरै महत्त्वपूर्ण पदार्थ - सीजीएमपी, वा चक्रवात गानोओसिन मोनोफोसफेट दबाउँछ, जो स्वस्थ निर्माणको प्रक्रियामा एक महत्वपूर्ण घटक हो। यसका लागी तपाईले यो कुरालाई ध्यान दिनु भएको छ कि तपाईले तपाईलाई थाहा पाउनु भएको छ। नतिजाको रूपमा, रगतले उनीहरूको लिंगको शरीरमा गुप्त ढाँचाहरू भर्न सक्छ, यसले गाह्रो र उत्साहित बनाउँछ। जब त्यहाँ धेरै PDE5 छ र पर्याप्त सीजीएमपी छैन, तपाईंको शरीरले मात्र तपाईंको तंत्रिका अन्त्यबाट आउँदा संकेतहरू प्रमाणित गर्न सक्दैन, जुन निर्माण प्राप्त गर्न पूर्ण वा आंशिक असक्षमताको परिणाम हो।
जब तपाईं 36-घन्टा Cialis / tadalafil पाउडर लिइरहनुभएको छ, यसले तपाइँको प्रणालीमा PDE5 को प्रभाव छिट्टै घटाउँछ, सामान्य रूपमा सीएनएमपी फर्क सामान्य स्तरमा 15-45 मिनेटमा। तर, तादालफिलको आधा-जीवन अपेक्षाकृत कम छ, यसको प्रभावले2दिनहरूमा PDE5 बनाउँछ र तपाइँको यौन स्वास्थ्यमा खराब हुन्छ। यसको विपरीत, जब तपाईं कम-कम शक्ति Cialis / tadalafil पाउडर लिइरहनुभएको छ, यसले तपाईंको शरीरमा स्वस्थ स्तरको सीजीएमपी कोयम राख्न मद्दत गर्दछ, तपाईंलाई फेरि यौन सम्बन्धको आनन्द लिने लामो मौका दिँदै। यो काम सुरु गर्न कम-बल Cialis 4-5 दिन लाग्दछ, त्यसैले पहिले पहिलो गोली लिनु पछि वास्तविक म्युमोमा बदल्न नसक्ने। तथापि, राम्रो भाग यो हो कि तपाईं फेरि बिस्तर मा कुनै पनि कठिनाइहरु को अनुभव कभी नहीं अनुभव गर्नेछन् - जब सम्म तपाईं दैनिक Cialis / tadalafil पाउडर लिइरहेका छन्।
Tadalafil पाउडर कसरी सही छ
कच्चा टाडाफाफिल पाउडर मुख्य रूपले बजारमा टेडालाफिल गोलको रूपमा आउँछ; क्याप्सुल, जब तपाईं टाडाफाफिल लिनु भएको निर्णय गर्नुहुन्छ, तपाईले तपाईंको आवश्यकता अनुसार खुट्टा समायोजन गर्नुपर्छ।
अधिकांश व्यक्तिहरूको लागि, टाडालुफिलको सिफारिश गरिएको खुराक प्रति दिन 10 मिलीग्राम हो, सामान्यतः 30 मिनेटहरू यौन क्रियाकलाप भन्दा पहिले लिइएको छ (आवश्यक अनुसारको लागि प्रयोगको लागि)। प्रतिक्रिया वा साइड इफेक्टहरूको पर्याप्ततामा निर्भर गर्दछ, खुट्टा 20 मिलीग्राममा बढ्न सक्छ वा एक दिन5मिलीग्राममा घटाइयो। Tadalafil को प्रभाव 36 घण्टा सम्म हुन सक्छ। व्यक्तिहरूले टाडलफिलको रगतको स्तर बढाउँदा औषधि लिइरहेका व्यक्तिहरू 10 माइगको पूर्ण मात्रामा 72 माइग भन्दा बढी हुनुपर्दैन (औषधी अन्तरक्रिया हेर्नुहोस्)। यौन क्रियाकलापको लागी एकैचोटि दैनिक प्रयोगको लागी सिफारिश गरिएको खुसी 2.55मिलीग्राममा दैनिक हुन्छ। Tadalafil दैनिक एक पल्ट भन्दा बढी लिनु हुँदैन।
महत्वपूर्ण नोट: रक्तचाप कम गर्न यसको क्षमताले गर्दा नाइट्रेटहरूसँग सिअलिस लिइएन। नाइट्रेट कम्तिमा 48 घण्टाको लागि लिन सकिँदैन पहिले Cialis धेरै नाइट्रेट प्रयोगकर्ताहरू संग यो र सबै PED5 को बचाउन आवश्यक छ प्रयोग।
ट्रडफाफिल पाउडरका लागि आवेदन
स्थानीय औषधि भण्डारमा, या अस्पतालमा, हामी सजिलै संग cialis हेर्न सक्छौं, जो tadalafil छ। हो, यो टाडालुफिल पाउडर हो - यो सामान्य अनुप्रयोग मध्ये एक ईडीको उपचारको लागी औषधमा बनाइन्छ, यो प्रायः गोलहरू वा ट्याब्लेटको रूपमा प्रयोग गरिन्छ, यसका साथै, वास्तवमा, टाडालुफिलले पनि अन्य अवसरहरूमा प्रयोग गर्दछ। :
यौन कैंडीको लागि ताडलफिल पाउडर
Tadalafil कैंडीहरुमा थप्न सकिन्छ साधारण साधारण क्यान्सर पुरुषहरु को यौन आवश्यकताहरु लाई बढावा दिन को लागि। मलेसियामा धेरै प्रकारका यौन मिठाईहरू छन्, मुख्य तत्वहरू सामान्यतया टाडालुफिल पाउडर, र sildenafil पाउडर।
सेक्स कफी को लागि Tadalafil पाउडर
बजारमा केही प्रकारका सेक्स कफी छन्। धेरै सामग्री सामान्यतया हुन्: नारियल दूध, हनी, दालचीनी, काको, मक्का .सेक्स कफीले एटटेक मोडिस्टको साथमा पेटी-प्रकारको पेय हो। स्वाद एकदम मसालेदार छ, तर कसैलाई स्वादको लागि कसैको स्वाद कलको अपील गर्न। यो सेक्स कफीसँग सामग्रीको प्रभावकारी ढंगले तपाईंको लिबियालाई बढावा दिने। मका, क्याको, दालचीनी, हनी र नारियल दूध सामूहिक रूपमा हार्मोन उत्पादन बढाउन मद्दत गर्दछ, वीर्य गुणस्तर सुधार, देरी रजोनिवृत्ति, कम रक्त शर्करा, सुधारमा सुधार र यौन सम्बन्ध सुधार गर्नमा सुधार गर्दछ।
हाम्रो लागि, कहिलेकाँही बलियो प्रभाव वा कमजोर प्रभावहरू हुन सक्छ, हामी यौन कफी बनाउँदो यौन उत्थान पाउडर टाडालुफिल जोडेर बनाउँछौं, ग्राहक अनुसार विभिन्न डिग्री प्रभाव कफी बनाउने आवश्यकता अनुसार।
तामालाफिल पाउडर कसरी खरीद गर्ने; AASraw बाट Cialis पाउडर खरीद गर्नुहोस्
इथिनील एस्ट्राडियोल (-57-63-))
साइप्रटेरोन एसीटेट पाउडर